Buluugleey, Wednesday, March 01, 2006
Maxamed Dheere ayaa cambaareeyey siyaasada Col. C\_llahi Yusuf, kuna tilmaamay nin qabyaaladu wax kasta kala weyn tahay. Dagaaloogahaas wuxuu ku eedeeyey Col. C\_llahi inuu maleeshiyooyinkiisa u diidey iney la qeybsadaan hubkii uga yimid Yemen oo uu ku koobay maleeshiyooyinka ay isku heybta yihiin.
Waxaa sidoo kale uu ku eedeyey in dhaqaalihii dowlada soo galay uu si beel ahaneed u maamushay, si gaarana loogu dhisay ciidamada ku xareysan xerada Kongo. Maxamed Dheere ayaan eedaas ka fiirsan maxaa yeelay maleeshiyooyinka uu naftiisu wato waa mid isaga ku heyba, isuna soo bandhiga iney yihiin ciidan dowladeed iyo kuwo gobol intaba.
Eedeynta qabqablaha Jowhar ayaa soo baxday kadib markii uu guuldaro ku dhamaaday wadahadal dheer oo u dhexeeyey isaga iyo Col. C\_llahi Yusuf. Taas oo ujeedadeedu ahayd in siyaasda Col. C\_llahi loo adeegsado qaab loogu heysto qaansheegasho aan dhamaneyn.
Col. C\_llahi ayaa hadda waxaa u muuqata halista ay leedahay si joogista Jowhar, waxeyna dantu biday inuu xaruun ku meel gaara ka sii sameysto magaalada ay beeshiisu degen tahay ee waqooyiga Gaalkacayo.
Waxaa heegan ku jira ciidanka xerada Kongo oo si sareysa uga xoog badan maleeshiyooyinka Jowhar, kuwaas oo isku diyaarinaya sidii ay xoog uga bixi lahayeen Jowhar kadib markii ay meel mari weyeen waan waan soo jiitameysey wakhti dheer. Waxaa la qiyaasayaa in ciidankaas ay u baxayaan dhinaca xuduuda Itoobiya inta Itoobiya aysan qaadan mowqif ay ku xulafeysaneyso labada nin midkood oo u muuqda mid hadda ku adag.
Maxamed Dheere ayaa hadda dadaal ugu jira inuu xaruunta isbaheysiga la dagaalanka wadaadada uu u soo wareejiyo magaalada Jowhar si dhaqaalaha loogu tala galay dagaalkaas looga maamulo Jowhar. Dagaaloogayaasha Muqdisho oo ay Maxamed Dheere isku heyb yihiin ayaad hadda moodaa iney dhinaca dagaalka iska baheysanayaan iyagoo fikirkoodu kala fog yahay, danta isku keentayna ay tahay sidii dowlada Mareykanka looga heli lahaa dhaqaale.
Dad badan oo xogogaala ayaa waxaa u muuqata isbaheysigaas inuu yahay mid lagu shirqoolayo Maxamed Qanyare oo mabda’ ahaan ay ka go’an tahay inuusan Itoobiya la wadaagin wax dana, waana taas ayaa la leeyahay mida hadda ku dhalisay Maxamed Dheere inuu isku dabciyo Qanyare.
Waxaa la tuhunsan yahay in xiriirka Itoobiya iyo Maxamed Dheere uu soo xoogeysaneyey meesha kan u dhexeeya Col. C\_llahi iyo Itoobiya uu sii liicayey. Sababta ugu weyn ee Maxamed Dheere uu ku helay tixgelintaas ayaa lagu saleynayaa wax ka qabadka mucaaridka Muqdisho haddii ay noqon lahayd wadaado iyo haddii ay noqon lahayd hogaamiye kooxeedyada Muqdisho.
Waxaa ay cid walba dareentay in dagaalkii 4 maalmood ka dhacay Muqdisho uu qasaarihii ugu badnaa ay ka soo gartey mudane Maxamed Qanyare, mana aysan dhicin cid la qeybsatay qasaarahaas soo gaarey. Dagaaloogayaasha ayaa dagaalka u jeediyey beelaha degan koofurta Muqdisho, iyaga oo ku tilmaamay iney kaalinayaan wadaadada ay intooda badan siku heybta yihiin, taasna waxey ka careysiisay qolooyinka sirdoonka oo aan daneyneyn dagaalka qabiilka, kaas oo aan lahayn dhamaad iyo ujeedada dagaalka oo aan sidii la rabey loo gareyn.
Waxa laga wariyey dagaaloogayaasha isku heybta ah ee ka soo wada jeeda waqooyiga Muqdisho iney aaminsan yihiin inuu ahaa Qanyare kan geliyey dagaalkii ay la galeen koofurta Muqdisho xiligii Cali Mahdi iyo Caydiid haddana uu uga baxay balantii sidaas daradeedna ay ku kaalmeynayaan bilowga dagaalka kadibna ay isaga baxayaan isaga iyo beelaha degan koofurta Muqdisho.
Maxamed Dheere ayaa hadda u muuqda mid isaga haray taageerada dowlada Col. C\_llahi Yusuf una soo jeestey sidii uu ula shaqeysan lahaa qolooyinka sirdoonka. Mareykanka ayaa ku eedeynaya Talyaaniga inuu gadaal ka jiidayo siyaasada dowlada Col. C\_llahi, taas oo dhalisay in taageerayaashiisu u kala jabaan kuwo daacad u ah talyaaniga iyo kuwo doonaya iney Mareykanka wax la qabsadaan.
Dowlada Yemen ayaa hadda ku soo hartay taageerada ay u heyso Col. C\_llahi, waxaana wax qabadkeeda dhabarjab ku ah Maxamed Dheere oo ka soo horjeeda Heshiiska Cadan, kaas oo uu u arkayo mid beesha Col. C\_llahi lagu hubeynayo, loona diyaarinayo qabiilkaas iney la wareegaan gacan ku heynta qaranka Soomaaliyeed. Sidoo kale dowlada Yemen ayaa waxaa ku socota eedeyn uga imaneysa dhinaca caalamka oo ku saleysan hubka ay siineyso maleeshiyada Col. C\_llahi iyo qaxootiga Soomaaliyeed oo ku le’anaya xeebaha Yemen.